Nkonyaayi ne Abayisɛm—Wohwɛ a Eye?
Nkonyaayi Ne Abayisɛm Nye
Satan pɛ sɛ wode wo ho hyɛ nkonyaayi mu. Nnipa pii yi mmusu na ama wɔn nananom a wɔawuwu anaa ahonhom abɔ wɔn ho ban afi ɔhaw ho. Wɔyɛ eyi efisɛ wosuro tumi a ahonhom wɔ no. Wɔhyɛ nkonyaa nkaa anaa nkapo. Wɔnom “nnuru” a wosusuw sɛ ɛwɔ nkonyaa tumi na wɔde bi srasra wɔn ho. Ebinom de nneɛma a wogye di sɛ etumi bɔ wɔn ho ban sie wɔn fie anaasɛ wɔde hyɛ fam. Afoforo nso de nkonyaa “nnuru” di dwuma efisɛ wogye di sɛ ɛbɛma asi wɔn yiye wɔ adwuma, sukuu sɔhwɛ ne nantew a edi aware anim mu.
Ade a ɛbɛbɔ wo ho ban sen biara wɔ Satan ho ne sɛ wobɛma Yehowa ayɛ w’adamfo. Yehowa Nyankopɔn ne n’abɔfo no wɔ tumi koraa sen Satan ne n’adaemone. (Yakobo 2:19; Adiyisɛm 12:9) Yehowa pɛ sɛ ɔde n’ahoɔden bɛboa ne nnamfo—wɔn a wodi no nokware koraa no.—2 Beresosɛm 16:9.
Onyankopɔn Asɛm ka sɛ: “Munnni asumansɛm.” Yehowa kasa tia nkonyaayi ne abayisɛm efisɛ saa nneyɛe no betumi ama obi de ne ho akɔhyɛ Satan Ɔbonsam tumi ase tẽẽ.—Leviticus 19:26.